Print Page - Namrata Shrestha - Photos and Profile
xNepali Forum => Celebrity profile => Topic started by: tundikhel on September 17, 2009, 09:32:45 AM
Title: Namrata Shrestha - Photos and Profile
Post by: tundikhel on September 17, 2009, 09:32:45 AM
Title: Re: Namrata Shrestha - Photos and Profile
Post by: tundikhel on September 17, 2009, 09:43:47 AM
(http://www.hotmail.com/, (http://www.hotmail.com/,) http://www.regards.com/ (http://www.regards.com/) , http://www.google.com/ (http://www.google.com/) )
Post by: tundikhel on September 17, 2009, 01:54:07 PM
Post by: khatee on September 17, 2009, 11:50:10 PM
Post by: xsajha on September 18, 2009, 12:11:24 PM
Post by: xsajha on September 20, 2009, 06:50:05 AM
Post by: kurakani on September 20, 2009, 11:59:18 AM
Post by: kacharo1 on September 20, 2009, 02:17:57 PM
Post by: xsajha on September 20, 2009, 11:08:53 PM
Post by: xsajha on September 20, 2009, 11:11:56 PM
Post by: rock on September 21, 2009, 07:54:37 AM
Post by: LazyFuck on September 23, 2009, 05:29:36 PM
Post by: gokaran on October 06, 2009, 07:12:21 PM
Post by: xsajha on October 08, 2009, 04:24:36 AM
Post by: nibbas on October 08, 2009, 05:46:21 AM
Post by: pradman03 on October 08, 2009, 11:28:14 AM
Post by: MoMo_Killer on October 09, 2009, 05:35:18 AM
Post by: pradman03 on October 09, 2009, 03:35:42 PM
Post by: tundikhel on October 09, 2009, 10:44:14 PM
Post by: pradman03 on October 09, 2009, 11:00:33 PM
Post by: pradman03 on October 12, 2009, 08:51:41 PM
Post by: luckykhadka on October 13, 2009, 10:37:01 PM
Post by: tundikhel on October 14, 2009, 02:40:28 AM
Post by: kurakani on November 04, 2009, 12:29:51 AM
Post by: tundikhel on November 04, 2009, 05:53:45 AM
Post by: tundikhel on November 05, 2009, 07:10:45 AM
Post by: tundikhel on January 31, 2010, 01:14:53 AM
Post by: thedevilway on January 31, 2010, 12:38:56 PM
Post by: tundikhel on January 31, 2010, 02:10:39 PM
Post by: tundikhel on February 25, 2010, 10:43:27 AM
Post by: tundikhel on February 25, 2010, 10:49:54 AM
Post by: tundikhel on February 25, 2010, 10:51:11 AM
Post by: tundikhel on February 25, 2010, 12:16:51 PM
Post by: tundikhel on February 25, 2010, 12:17:44 PM
Post by: handsy on February 25, 2010, 12:26:37 PM
Post by: noname on February 25, 2010, 04:02:33 PM
SALA TYO NAMRATA LAI SUPPORT GARNE HARU,,, SALA TYO VIDEO HERERA MASTURBATE NAGAREKO KOI CHHA?????? MASALE HARU BAZZAR MA PRATEK LAI NAPAYE SAMMA KHOJEKO HOLA,, NAMRATO KO CHHA?? NAMRATA KO CHHA?? BHANDAI.....
Post by: noname on February 25, 2010, 04:05:49 PM
Post by: tundikhel on March 07, 2010, 12:31:21 AM
Post by: winkantipur on May 01, 2010, 12:36:32 AM
Post by: tundikhel on August 08, 2012, 02:12:16 AM
Post by: tundikhel on August 23, 2012, 09:46:37 PM
नम्रताको पनि दिन गएछ --- चाउरी पर्न थालेछ
Post by: tundikhel on August 23, 2012, 09:48:29 PM
Wednesday, 22 August 2012 19:10 नागरिक
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले मंगलबार काठमाडौंमा एउटा गीतको म्युजिक भिडियोमा नृत्य गरेकी छिन्। ४४ म्युजिक भिडियो र केही फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नम्रताले नाचेको यो पहिलो पटक हो।
'यसअघि गीतमा अभिनय गरे पनि छमछम कम्मर मर्काएर नाचेको यही गीतमा हो,' नम्रताले भनिन्। विनोद बाजुरालीको शब्द तथा संगीतमा अञ्जु पन्तले गाएको गीत 'म त नाचेँ'मा नम्रताले नाचेकी हुन्।
गीतको कोरियोग्राफी र भिडियो निर्देशन शिव बिकले गरेका हुन्।
Post by: tundikhel on August 30, 2012, 09:30:04 PM
Post by: tundikhel on September 30, 2012, 03:23:32 AM
Post by: tundikhel on October 18, 2012, 10:32:20 AM
Post by: tundikhel on November 15, 2012, 11:15:26 AM
Nhu Da ya bhintuna
Post by: tundikhel on December 22, 2012, 08:00:31 AM
Post by: tundikhel on December 23, 2012, 04:27:01 PM
Post by: tundikhel on December 23, 2012, 04:27:09 PM
Post by: tundikhel on December 27, 2012, 11:34:45 PM
Post by: tundikhel on December 28, 2012, 01:00:08 AM
Post by: tundikhel on January 27, 2013, 12:59:45 PM
Post by: tundikhel on January 27, 2013, 12:59:53 PM
Post by: tundikhel on February 14, 2013, 01:46:30 PM
Post by: tundikhel on June 06, 2013, 11:03:49 AM
Post by: tundikhel on June 29, 2013, 06:46:26 PM
Post by: tundikhel on July 26, 2013, 09:05:50 PM
Post by: tundikhel on August 20, 2013, 11:06:27 AM
Post by: tundikhel on September 09, 2013, 11:39:51 AM
Post by: tundikhel on May 06, 2014, 02:25:23 PM
Post by: tundikhel on March 04, 2015, 01:37:10 PM
Namrata Shrestha produced Soul Sister ..
Details about the film -- > http://filmsofnepal.com/nepali-film-soul-sister-2015/
It is sad, the film wasaflop
Post by: anand on March 23, 2015, 09:48:30 AM
Namrata's first production movie -- "Soul Sister" flopped big time
But, she is not sad
REad more: http://xnepali.net/movies/soul-sister-flopped-namrata-shrestha-is-not-sad/
Post by: kurakani on March 30, 2015, 03:57:00 AM
Post by: anand on April 21, 2015, 08:55:37 AM
नायिका नम्रता श्रेष्ठसँग विवाह गर्नुहुन्छ ?
नम्रता उपन्यासलाई पठनीय र सन्देशमुलक बनाउनका लागि साथीहरुको सल्लाह, सुझाव ग्रहण गर्न ‘नोभेल नम्रता’ को नामबाट फेसबुक बनाएँ । त्यसमा यो फेसबुक किन बनाइएको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट लेखिएको थियो । राम्रोसँग अध्ययन गर्नेले मैले नै यो बनाएको हुँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । नोभेल नम्रताको नामबाट फेसबुक बनाइसकेपछि सुझबुझ भएका मित्रहरुले यसको विषयमा प्रभावकारी सल्लाह र सुझावहरु दिइरहनुभएको थियो । केही मित्रहरुले नम्रताको तस्वीर राखेर उनको नाममा फेसबुक खोलेकोमा मेरो यस्तो कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नम्रताप्रति सहानुभूति पनि राख्नुभयो । मैले फेसबुक खोल्नुको कारण र उद्देश्यबारेमा जानकारी गराएपछि उहाँहरु मेरो समर्थक बन्दै शुभकामनाका गुच्छाहरु अहिलेसम्म चढाउन छाड्नु भएको छैन । नम्रताको नाममा फेसबुक खोलेपछि सौगात पोख्रेलको नामबाट एकजना फेसबुकको मित्र जसले फेसबुकमा मलाई मात्र साथी बनाउनु भएको रहेछ, उहाँले विभिन्न तरहले नम्रताको यतिधेरै खिल्ली उडाउनुभयो कि जसको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । उहाँ र मेरो लामो बहसपछि मैले उहाँलाई केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सफल भएँ । उहाँले मलाई नम्रतासँग ‘बिहे गर्नुहुन्छ ?’ भनेर समेत प्रश्न गर्नुभयो । मैले म एक्लै भएको भए, नम्रतासँग हाँसी–हाँसी विवाह गर्थेँ भनेँ । उहाँलाई त्यही प्रश्न दोहोरोउँदा उहाँले जिन्दगीभरिको लागि नभएर ५ दिनको लागि मात्र विवाह गर्छु भन्नुभयो ।
(थप फेसवुकको वार्तालापबाट)
आज लेखेको कुरा साथीहरुलाई बाँड्नुप¥यो भन्ने उद्देश्यका साथ नोभेल नम्रताको नाममा रहेको फेसबुक खोलेँ । फेसबुक खोल्नासाथ सौगात पोखरेल नामबाट मलाई च्याटका लागि निमन्त्रणा पठाइयो । केही दिनदेखि यस प्रकारका निमन्त्रणहरु गनी नसक्नु पाइ सकेको थिएँ मैले । जसले जे भनेपनि म आफ्नो काम गर्दथेँ । उपन्यासको विषय बस्तुहरु अगाडि बढाउनेक्रममा फेसबुकमार्फत नम्रताले नै कुनै सन्देश पठाउँछिन् कि भन्ने आशाका साथ पनि उनको नामको फेसबुकको च्याट समेत खोलेरै राख्थेँ । सागर पोखरेलको निमन्त्रणालाई अन्यलाई जस्तै गरी मैले तिरस्कार गरेको थिएँ । पहिलो आमन्त्रणलाई अस्वीकृत भएपछि उनले उपन्यास किन भनेर लेखेँ । यसले पनि मलाई रत्तिभर छोएन । त्यसपछि उनले ‘पढौं न तिमीमा के छ ?’ भन्ने लेखेपछि मैले छोटो उत्तर दिए– ‘के हजुर ?’
‘नम्रताले तपाईसँग बिहे गर्न मानी भने गर्नुहुन्छ ?’ फेसबुक मित्रले मैले सोच्दै नसोचेको कुरा भनेपछि म अक्मकिए । के भनौं भनौँ भयो । केहीबेरको मौन्तापछि हाँसोको फोहोरा उनीसँग फेसबुकमार्फत छुटाएँ । त्यसपछि मनलाई सम्हाल्दै भनेँ ‘तपाईलाई ढाँटेर भनु कि सही भनु ?’
‘तिम्रो लाइफ नोभेल हो ?, नोभेल निक लेखेको ?, फेक आइडी पो रहेछ यो त, हिरोनीको पिस पो छ त ?’ सौगातको नाममा फेसबुकबाट यस्तो भनेपछि मैले यसलाई लाइक मात्र गरिदिएँ । उताबाट पुनः प्रश्न तेसाइयो–तिमी हिरोनी हो ? आलु ।’
‘होइन मित्र म उहाँको बारेमा नोभेल लेख्दैछु’– मेरो यस्तो उत्तर सुनेपछि फेसबुक मित्रले झटपट आफ्नो भनाई राखे– ‘हाहाहा, अरु काम धन्दा छोडेर के त्यो आलुको बारेमा नोभेल लेख्नु भा’को हजुरले । हुन त तपाईँको व्यक्तिगत विषय हो । तरपनि संसारमा थुप्रै अरु काम छ हजुर त्यो केटीको चित्रण गर्नु भन्दा चिया बेचेर बस्नु उपयुक्त होला । मित्र जी’
‘यो संसार अनौठो छ । सबैको आफ्नो सोंचाइँ हुन्छ । मलाई यही विषयमा लेख्न मन लाग्यो । तपाईको लागि आलु मेरो लागि अति प्रिय छ’– मेरो भनाइ सुनेर उनले पनि लामो भनाइ राखे– ‘हुन त तपाईको सोंचको कदर गर्दछु, तर एक दिन यो विषयमा किन कलम चलाएछु भनेर तपाईँ नै पछुताउनु हुन्छ ।’
‘म यो उपन्यासमा नम्रताको केवल साहसको प्रशसा गर्न खोज्दैछु । अफ्ठ्यारोमा पनि बाँच्न सक्ने, संघर्ष गर्न सक्ने ।’
‘ठमेलबारमा काम गर्ने, नाँच्ने, डिस्को जाने उसको चरित्र हो, के को त्यस्ता घटनामा आत्महत्या गर्थी । भारतीय नायिका सन्नी लियोन उसको आत्मविश्वास हो ।’
‘त्यो त मलाई यो विषयमा थाहा छ छैन मित्र, म उपन्यास लेखनमा डुबी सकेको छु, उत्रन गाह्रो छ ।’
‘माफ गर्नु होला मित्र, मैले तपाईको व्यक्तिगत मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेँ, तर मलाई अलि अर्कै लागेर यति भनेको हुँ’– फेसबुकका मित्रले सम्झाउन खोजे । म भने उपन्यासका नसाभित्र पूर्णरुपले डुबिसकेको छु–‘हजुर मलाई उत्रन भन्दै हुनुहुन्छ, म झन झन उपन्यास लेखनको सागरमा डुव्दैछु ।’
‘हाहाहा, डुव्नुहोस् मित्र डुव्नुहोस । भन्छन् नि केटीको चरित्र र समुन्द्रको गहिराई नाप्न गाह्रो हुन्छ ।’
‘नम्रतालाई भेट्नु भाछ ?’ मेरो प्रश्नमा उनले छोटो उत्तर दिए–‘किन नभेट्नु त्यसलाई धेरैपटक भेटेको छु । दुई तीन वर्ष पहिला । त्यही त भन्दैछु नि ! तर मलाई लाग्छ, तपाईको गहिरो माया बसेछ नम्रतासँग’–उनले मलाई छाम्न खोजेपछि मैले यसको स्पष्टीकरण दिए– ‘होइन त्यस्तो मेरो उनीसँग मायासाया केही बसेको छैन । अनि कहाँ भेट्नु भा’हो ?’
‘सबै कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नरिसाउनु होला । संसारमा म्याद गुज्रिएको सामानको मूल्य चुकाउँछ समाजले तर म्याद गुज्रिएको चरित्रहीन क्यारेक्टरको बारेमा लेखिएको उपन्यासको मुल्य चुकाउन समाज तयार छैन । बजारमा यो पुस्तकको कुनै मुल्य हुनेछैन । त्यसैले आफ्नो अमूल्य समय यो दुई कौडीको केटीको लागि बर्बाद नगर्नुहोस्–’ फेसबुक मित्र शिक्षक बन्न खोजे । म भने आफ्नो तर्कमा अडिग थिएँ– ‘तपाईँको लागि होला, तर मेरो लागि यो उपन्यास लेखनको समय अति नै अमूल्य र प्रिय छ । म कौडा कौडी जोडेर करोड बनाउँछु । नाफा र नोक्सानको कुरा व्यवसायीले गर्दछन् । म यसबाट कमाउन चाहन्न । जहाँसम्म गुमाउने कुरा छ । गुमाउनुमा छुट्टै मजा छ ।’
‘सुनेको थिएँ, साहित्यकारहरु पागल हुन्छन् भनेर आज प्रत्यक्षरुपमा देखेँ !’
‘यो विषयमा पागलपनको हद नाँघ्न मन लागेको छ मित्र !’
‘घरमा चामल छै भन्दा खल्तीमा पैसा नहुने, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउनका लागि पनि पैसा नहुने, साहित्यमा डुबेर शव्दको खेती गर्ने, आफू र घरपरिवारको जिन्दगी नाजुक बनाउने साहित्यकार, त्यसमा पनि तपाईँले भोली थाहा पाउनु हुनेछ, यो विषयमा कलम चलाएर कति ठूलो गल्ती भएछ भन्ने कुरा । अहिले डुब्नुहोस् नम्रताको यादमा, लेख्नुहोस्, उपन्यास पछि अभाव, छटपटि, पीडाले तपाईँको जिन्दगीको उपन्यास लेख्नेछ’–फेसबुक मित्रले गहकिलो शव्दहरुले मलाई सुझाब दिन थाले । तर म उनको सुझाबलाई सुनेपनि ग्रहण गर्ने पक्षमा थिइन । उनी भने एकपछि अर्को सुझाब दिइरहेका थिए । ‘काम गर्नुहुन्छ कि उपन्यास मात्र लेख्नु हुन्छ ?’
‘काम पनि गर्दछु, आफू र घरपरिवारको जोहो गर्न सक्छु ।’
‘त्यसो भए ठीक छ, सन्तुष्टि पनि ठूलो कुरो हो । म त वैरागी साहित्यकार मात्र हे कि भनेर यति सब कुरा भनेको हुँ । मलाई नम्रताको भन्दा पनि तपाईँको चिन्ता लागेको हो मित्र ।’
‘धन्यवाद मित्र, गहकिला सुझाबहरु दिनु भएको छ । तर मेरो बिन्ती छ, नम्रतालाई नराम्रो नसोंच्नुहोस्, उसलाई दुई कौडीको केटी पनि नभन्नुहोस्’– मैले बिन्ति बिसाएँ । उनले मेरो बिन्तीलाई स्विकार गर्दै आफ्ना कुरा राखे– ‘हवस मित्र, गधे पे दिल लगि तो परि क्या चीज हे । अनि तपाईको उमेर कति भयो ?’
‘तपाईँ नै अनुमान गर्नुहोस्, हजुरलाई धेरै कुरा आउँदो रहेछ ।’
‘३० को हाराहारीमा ।’
‘हो हो, तर साहित्य लेखनमा उमेरले के नै असर गर्दछ र !’
‘ढाँटेरै भन्नुहोस् ।’
‘तर म नढाँटेर भन्छु, खासमा म एक्लै हुन्थेँ । मैले पनि कसैलाई वाचा बन्धन नगरेको भए, नम्रताले मानेको खण्डमा उनलाई हाँसी–हाँसी बिहे गर्थेँ । अनि तपाई बिहे गर्नुहुन्छ नम्रतालाई ?’
‘पाँच दिनको लागि हो भने गर्थेँ ।’
‘किन पाँच दिनको लागि ?’
‘राम्री छे, पाँच दिन भन्दा धेरै थेग्न के सकिन्छ उसलाई, म पनि पाँच दिनमा आउँछु होला । तपाईँलाई मेरो कुरा नपच्न सक्छ, मेरो सोच घटिया लाग्न सक्छ । तर सत्यता यही हो । दैनिक लाखौं खर्च गर्न सक्ने हैसियत छैन मेरो । यहाँ सब चीज बिकाउँछ । सायद तपाईँलाई यस विषयमा थाहा छैन । म उसलाई राम्रोसँग चिन्छु । उसँग ३ वर्ष पहिला डिस्को पनि गा’छु । उ तपाईँहरुको लागि अमूल्य होली, मेरो लागि उसको कुनै मूल्य छैन । उसलाई नेपाली समाजको कुनै मतलब छैन । बिदेशी सोच, बिदेशी कुरा । आजभोली भने म बिदेश भएकाले उसको बारेमा धेरै थाहा छैन’–फेसबुक मित्रले भाषण छाँटेपछि म पनि के कम थिएँ र ! आफ्नो भनाइ पस्कीहालेँ–‘तपाई कुरा भने धेरै ठूलो गर्नुभयो, तर श्रम खर्चिएर बिदेशीलाई बनाउन जानु भएको रहेछ । नेपालीहरुले धेरै देशहरुको विकास गरे । नेपाल तपाईँहरु जस्तै व्यक्तिका कारण गरिवको गरिब छ । कमसेकम नम्रता स्वदेशमै बसेर श्रम गरिराछिन् । संघर्ष गरिराछिन् । संघर्षको अर्को नाम हो नम्रता ।’
‘मित्र बोल्न धेरै सजिलो छ । खोक्रो आर्दशले र मिठो नेपाली शव्दहरु साहित्य र नेपाली राजनीतिमा सुहाउँला, बास्तविक जीवनमा सुहाउँदैन । पेट भर्नको लागि श्रम गर्नुपर्छ ।’
‘हामीले बुझ्न र बुझाउन नसकेको कुरा यही हो । हामी नेपाली १०–५० हजारको लागि बिदेश जान्छौं । सायद तपाईले आफ्नो श्रमको महत्व बुझ्नु भएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट कबाड खेर्न, सिरक डसना बनाउन, कपाल काट्न नेपाल आएकाहरुले महिनैपिच्छे लाखौं कमाउँछन् यहाँ । बिदेशमा गर्ने श्रम यहाँ गर्न सकिदैंन मित्र ?’
‘सीप अनुसारको श्रम गर्न नेपालमा कसले पाएको छ र ? म पनि आफ्नो सीपलाई सदुपयोग गर्न बिदेश आएको हुँ । मलाई पनि रहर थिएन, बिदेशमा बस्ने, नेताहरुले ठूला कुरा गर्दछन्, संविधान बनाउँदैनन् । अनि किन बस्नु यहाँ ?’–फेसबुक मित्रले चोटिलो जवाफसहित प्रश्न राखे । म पनि उनको भनाइमा कडारुपले नै प्रस्तुत हुन थालेको थिएँ– ‘तपाईँहरु जस्तै प्रतिभा भएको व्यक्तिहरुको घटिया सोचले मुलुक दिनप्रतिदिन विपन्न हुँदैछ । श्रम खर्च गर्ने वातावरण आफूले पनि निर्माण गर्ने हो । अरुले गरिदिएला र म खाउँला भन्दै सधैभरि बिदेशी मानसिकता बोक्ने हो भने अझैं धेरै पुस्ताले यही पीडा व्यहोर्नु पर्नेछ । मुलुकमा वातावरण छैन भने बनाउन लागौं मित्र, भागेर अन्यत्र सरणार्थी बनेर काम छैन ।’
‘कुरा गर्न सजिलो छ मित्र । पैसा नै ठूलो छ यो संसारमा । म पनि मान्छे हुँ । तपाईको उपन्यासको पात्र जस्तै । उनी पनि पैसालाई नै महत्व दिन्छिन् । उनलाई आर्दशबादी बनाउन खोज्दै हुनुहन्छ तपाईँ । तपाईँहरु जस्तै बिग्रिएका शुभचिन्तकहरुले नम्रतालाई टिकाएका छन् । ३० लाख हुने हो भने जो पनि नम्रताको ठाउँमा पुग्न सक्छन् फिलिम बनाएर । चल्ने, नचल्ने भाग्यको कुरा हो । तपाईसँग आज धेरै कुरा भयो । अहिले पनि मेरो भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाई यो विषयमा भन्दा देशको विषयमा, मुलुक बनाउने विषयमा, फोहोरी राजनीति सुधार्ने विषयमा कलम चलाउनुहोस् । तपाईँलाई नै फाइदा होला ।’
‘सुझाबको लागि धन्यवाद । अन्य विषयमा पनि मैले उपन्यास लेखेको छु । लेख्ने छु । नम्रताको विषयमा केवल मैले जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि मान्छे मर्नुहुन्न, आत्महत्या गर्नुहुन्न भनेर लेख्न खोजेको हो’– मेरो कुरा फेसबुक मित्रले पचाउन सकिरहेका थिएनन् । उनले फ्याट्ट जवाफ दिए–‘अरु मान्छेले पनि त संघर्ष गरेका छन् । अभावका बीचमा प्रगति गरेका छन्, उनीहरुको नलेखेर किन नम्रताकै पछाडि लाग्नु भएको छ ? के यी विषयहरु तपाईले देख्नु भाछैन ?’
फेसबुक मित्र यतउता, जे गरेपनि अन्तमा नम्रतालाई नकारात्मकरुपमा हेर्न छाड्दैनथे । म मेरो पात्रलाई नराम्रो भनेको सुन्न नचाहने । त्यसैले फेसबुक मित्रलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास जारी थियो– ‘म यो उपन्यासमा नम्रताको मात्र कुरा राख्ने छैन । पैशाको पछाडि मान्छे लाग्ने होइन, पैशालाई पछाडि लगाउने हो भन्ने कुरालाई पनि देखाउनेछु ।’
‘तपाईँको कुरामा म पनि सहमत छु । केवल उपन्यासको पात्र परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने नै हो । अरु त सबै ठिक छ तपार्इँको भनाई ।’
‘तपाईँलाई नम्रता देखेर किन यति धेरै घृणा ? या त तपाईँ उसको पूर्वप्रेमी हुनुहुन्छ, या तपाईँले उसलाई हद मन पराउनु हुन्थ्यो, पाउनु भएन ।’
‘त्यस्तो होइन मित्र । तपाईँ किन नम्रता, नम्रता, नम्रता भनि रहनु भएको छ । अरु केही आउँदैन तपाइँलाई ? नोभेल नम्रता किन ? नोभेल नेपाली चेली लेख्न सक्नु हुन्न ?’
‘सक्छु, किन नसक्नु, नोभेल नम्रता पनि नेपाली चेलीकै कथा हो । यसमा खराब राजनीतिदेखि समाजको कुरुप सोचका बिरुद्धमा मेरो कलम चलेको छ, कसरी नेपाली चेलीहरुले समाजमा संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि देखाउने छु’– म आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन अनेक तवरबाट प्रयास गर्दै थिएँ । फेसबुक मित्र पनि कम रहेनछन्– ‘उपन्यासमा यी सब देखाउनका लागि तपाईँ समाजले तिरस्कार गरेको नम्रतालाई नै किन रोज्नु हुन्छ ? अरु भेटाउनु हुन्न ?’
‘नम्रतालाई यहाँसम्म ल्याउने पनि, बिगार्ने पनि, सपार्ने पनि, सफलतामा पुर्‍याउने पनि यही समाज हो, तपाईँ हामी हौं ।’
‘कसरी समाजले उनलाई बिगार्न सक्छ । १८–१९ वर्षको उमेर केटाकेटी हो र ? शारीरिक सम्वन्ध राख्न र अश्लिल भिडियो जबरजस्ती बनाउन समाजले दबाब दिएको होइन होला क्यारे ! मित्र तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ, भ्रमको पर्दालाई उर्घानुहोस् ।’
‘म प्रष्ट छु मित्र, भ्रमको पर्दा कँही कतै छैन । तपाई यहाँ काम छैन भन्दै कामको खोजीमा बिदेश जानुभयो, काठमाडौं कस्तो छ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । त्यसमा पनि राम्री केटीलाई काठमाडौंमा स्थापित हुन के गर्नुपर्छ, काठमाडौंले सही तवरबाट अगाडी बढ्न दिन्छ कि दिदैंन त्यो तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ । नम्रता अति सुन्दर छिन् । उनलाई सुरुका दिनमा काठमाडौंमा स्थापित हुन कति संघर्ष गर्नु प¥यो होला । काठमाडौंको दाह्रा, नंग्राले उनलाई कदम–कदममा चिथोर्न खोज्यो होला । अगाडि बढ्नेक्रममा भेटिएको मन मिल्ने व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु ठूलो कुरा होइन’–म आफ्नो तर्क राख्दै थिएँ । फेसबुक मित्र पनि आफ्नो भनाइमा अडिग थिए– ‘केटीलाई शिकारी केटा मनपर्छ, यहाँ यस्तै भएको हो । अरु सबै भन्ने कुरा न हुन । तर पनि देशको बारेमा लेख्नुहोस्, मेरो भनाइ यही छ । देश दुःखेको छ, तपाईँ भने नम्रताको दुःखाई कम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उसलाई अनावश्यक स्पेश दिएर अझै उसको हाइट बढाउने र चर्चामा ल्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ ।’
‘मलाई पनि थाहा छ, देश दुःखेको छ, रोइरहेको छ । संविधान बनेको छैन । मुलुक अशान्त छ । चारैतिर व्यथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर मौलाएको छ । यी कुराहरु पनि यसमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु । तर नम्रतालाई भने कुनै पनि हालतमा यो उपन्यासबाट बाहिर निकाल्न सक्दैन । नम्रता बिना उपन्यासको अर्थ छैन ।’
‘नम्रतासँग भेट्नु भाछ ? यो विषयमा उसलाई केही थाहा छ ?’
‘एकपटक उहाँसँग भेट भाछ, तर यो विषयमा केही कुरा भएको छैन । धेरै साथीहरुले यो विषयमा नम्रतासँग कुरा गर्न सुझाब दिएका छन्, भेट्नु पर्ला ।’
‘नम्रतालाई एक झलक देखेको भरमा यति गहिरिनु भाछ तपाईँ, झनै उसँग बोलेपछि के होला ? मान्छे यतिसम्म पागल हुँदा रहेछन्, क्रेजी हुँदा रहेछन्, अचम्म लाग्यो । अनि उनले तपाईलाई उपन्यास लेख्न स्वीकृति दिइनन् भने के गर्नु हुन्छ ?’
‘म यो विषयमा उपन्यास जसले रोके पनि लेखेरै छाड्छु । जहाँसम्म नम्रताको कुरा छ, उनले स्वीकृति दिइनन्, उनलाई यही उपन्यासका कारण पीडा हुने भयो, अफ्ठ्यारो पर्ने भयो, नलेख्न अग्रह गरिन भने पात्र फरक बनाएर भएपनि उपन्यास लेख्नेछु ।’
‘फेसबुकका अनुसार तपाईँले उपन्यासका धेरै विषय बस्तु तयार पार्नु भएको छ जस्तो छ । धेरै ठाउँमा नम्रताको नामहरु उल्लेख छन् । यदि तपाईँको बिरुद्धमा उनले मुद्दा हालिन भने ?’
‘मान्छे मारेको छैन, चोरी डकैती गरेको छैन, लेखेकै कारण मेरो पात्रले नै स्वयम् मुद्दा हाल्छ भने म थुनिन पनि तयार छु, यसमा मलाई कुनै पछुतो लाग्ने छैन ।’
‘लेख्नकै लागि पागलपनको हद नाँघ्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँको लेखनप्रतिको समर्पण, आफ्नो पात्रप्रतिको समर्पण, लगाव देखेर म प्रभावित भएँ । नम्रताले नेपाली समाजभित्र रहेर पनि आफूमाथिको बज्रलाई सहन सकिन्, संघर्ष भने गरिरहेकी छन् । सायद यो नै उनीबाट सबैले सिक्ने कुरा हो । म तपाईका कारण नम्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दैछु । उनको संघर्षपछिको सफलताबाट नेपाली समाजले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, सिक्न सक्छ । धन्यवाद मित्र, छिटै उपन्यास पूरा गर्नुहोस्, म पनि तपाईँको उपन्यासको पाठक बन्नेछु । तपाईँलाई शुभकामना’– दिनभरी फेसबुकमा भएको कुराकानीपछि फेसबुक मित्र बल्लतल्ल मेरो पात्र नम्रताप्रति सकारात्मक हुन पुगे । उनी भित्रैबाट सकारात्मक भएका छन् कि मलाई खुशी बनाउन भएका हुन्, त्यो त मलाई थाहा छैन । तर पनि मेरो उपन्यास लेख्नुको एउटै उद्देश्य छ– ‘जटिल परिस्थितिमा मान्छे बाँच्यो भने सफलताले एकदिन चुम्नेछ । नम्रताले आत्महत्या गरेको भए, आज उनको केवल नकारात्मक टिप्पणीहरु भइरहन्थ्यो । तर उनले संघर्ष गरिन । आज उनी सफल छिन् । सकारात्मक कोणबाट पनि उनलाई समाजमा हेर्ने धेरै मनहरु छन् ।’ फेसबुकमा लामो वार्तालाप पश्चात् फेसबुक मित्र र म बिदावारी भयौं ।
यस अबधिमा केही यस्ता फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु भेटिए, जो मानिसको रुपमा पशु नै हुन जस्तो मलाई लाग्यो । उनीहरुले यतितल्लो तहसम्म झरेर नम्रतालाई गाली गरिरहेका थिए । उनीहरुले नांगा तस्विर र भिज्वलहरु पनि ट्याग गर्दै आफ्नोतर्फबाट घृणित उपहार पठाउन व्यस्त थिए । केही व्यक्तिहरु मलाई नै नम्रता ठानेर हरदम ‘म तपाईँलाई माया गर्छु, मसँग भेट्नु हुन्छ, म तपाईँको लागि जे पनि गर्न सक्छु’ भन्दै आफ्नो फोन नम्बर पनि निरन्तर दिइरहेका थिए । ‘नोभेल नम्रता’ फेसबुकमार्फत यो उपन्यासको बारेमा धेरै व्यक्तिले थाहा पाउन भनेर यो फेसबुकमा जोडिन चाहे जतिका मित्रहरुसँग सम्वन्ध स्थापित गरेको थिएँ । तर मित्रताको आडमा फेसबुकलाई प्रयोग गर्दै मनको तुष मेट्ने, घिन लाग्दो कार्य गर्दै आफ्नो सन्तुष्टि पुरा गर्ने कार्यहरुमा लिप्त सबै फेसबुकका अराजक, असभ्य मित्रहरुलाई मैले फेसबुकबाट हटाउँदै गएँ । यतिबेला मलाई लाग्यो, बास्तवमै समाजमा बस्ने मानवरुपी पशुहरुले नम्रतालाई मिनेट–मिनेटमा अनेक तवरबाट चिथोरिरहेका छन् । ती पशुहरुको हर्कतबाट म यति उकुसमुकुस भएको छु भने बिचरी नम्रतालाई समाजमा रहेका दानबहरुले निश्चय नै बसी–खान दिएका छैनन् होला । त्यसैले उनले फेसबुक बन्द गरेकी रहेछिन् । तर तमासाको रंगमञ्च खडा गरेर मनोरञ्जन लिने केही अन्यायीहरुले नम्रताको नामबाट फेसबुक बनाएर अनेक तवरले उनको बेइज्जत गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आज मैले घृणा गरिरहेको छु, भोलि उनीहरुकै खराव चिन्तनका कारण समाजले उनीहरुलाई घृणा, तिरस्कार र अपमान गर्नेछ ।
(अप्रकाशित उपान्यास ‘नम्रता’को एउटा अंश)
Post by: tundikhel on June 15, 2015, 12:07:21 PM
Post by: tundikhel on July 11, 2015, 02:21:15 PM
"म भल्गर होइन् सेन्सुअल फिल्म खेल्न तयार छु" : नम्रता श्रेष्ठ
नेपालकी चर्चित गायिका अन्जु पन्तको "म त नाचें नाचें नाचें" बोलको म्यूजिक भिडियोमा आफ्नो कम्मर मर्काउँदै नायिका नम्रता श्रेष्ठले नाचेकी छिन् ।
सुटिङको दौरान डिसी नेपालले नम्रतासंग गरेको कुराकानीमा उनले आफ्नो आउने प्रोजेक्टको बारेमा भन्न नमिले पनि आफू उक्त काममा व्यस्त भएको बताएकी छिन् । यसरी म्यूजिक भिडियोमा पहिलो पटक नाचेको अनुभव सुनाउँदै श्रेष्ठले काम गर्न रमाईलो भएको बताईन् । अचेल फिल्ममा किन देखिनु हुन्न नि ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनले आफूले सेलेक्ट गरेर मात्र काम गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।
आफ्नो आउन लागेको फिल्म 'छड्के' को पोष्ट प्रोडक्सन भइरहेको जानकारी दिदैं नम्रताले आफूलाई सुहाउँदो पात्र भएमा मात्र फिल्म खेल्ने बताईन् ।
तपाईंलाई सेक्स सम्बन्धि फिल्मको अफर आयो भने खेल्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले सेन्सुअल चिजलाई भल्गर नबनाईकन फरक प्रस्तुतीका साथ अफर आएमा आफूले त्यसलाई स्विकार्ने बताईन्
Post by: anand on August 06, 2015, 08:04:51 AM
Post by: anand on August 06, 2015, 08:05:40 AM
Post by: tundikhel on October 16, 2015, 03:29:54 AM
Post by: sag on October 21, 2015, 06:38:34 AM
NEWS -- naya boyfriend of Namrata Shrestha
The Facebook of Dawa
Post by: sunita_bhauju on October 25, 2015, 06:28:48 AM
Post by: anand on January 29, 2016, 05:10:56 AM
Post by: anand on July 30, 2016, 10:45:01 PM
Post by: bigggie on September 23, 2016, 03:22:07 AM
Post by: samirissues on September 23, 2016, 08:23:12 PM
Post by: tundikhel on September 24, 2016, 02:50:45 AM
Post by: tundikhel on January 22, 2017, 09:30:00 PM
Post by: anand on April 26, 2017, 01:11:06 AM
Post by: samir211 on April 03, 2020, 06:07:49 PM
हल्लामा अल्झियो भने कहीँ पुगिँदैन
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा जमिरहेकी नम्रता श्रेष्ठलाई एसएलसी दिउञ्जेलसम्म अभिनेत्री हुने कुनै रहर थिएन। तर, यतिबेला उनी अभिनय बाहेक केही नसोच्ने भएकी छिन्। त्यसैगरी उनलाई आफू सुन्दर छु जस्तो कहिल्यै लाग्दैन, तर सुन्दरी अभिनेत्रीका रूपमा अहिले उनकै नाम अगाडि आउँछ। आधा दर्जन फिल्ममा काम गरिसकेकी नम्रताको ‘ताण्डव’ र ‘सम्बोधन’ रिलिजको तयारीमा छन्। म्युजिक भिडियो र एडमा पनि उत्तिकै देखिने अभिनेत्री नम्रतासँग धनबहादुर खड्काको अन्तरंग कुराकानीः
नेपालमा कलाकारिता गतिलो करिअर हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहेकै बेला तपाईंले कामको सहजताका लागि म्यानेजर राख्नुभएछ!
पछिल्लो समय तपाईंको व्यस्तता पनि निकै बढेको हो?
पहिले मलाई धेरै फिल्म गर्नु थिएन। वर्षमा एउटा राम्रो फिल्म गर्छु भनेर अघि बढिरहेकी थिएँ। तर, यामाहाको प्रमोसनल टुरमा जाँदा अडियन्सले मलाई हेर्न चाहेको कुरा राखे। फिल्ममा त्यति देख्न नपाएको गुनासो गरे। त्यसपछि चाहिँ यही क्षेत्रका लागि भनेर लागिरहेकी छु भने राम्रो फिल्म भ्याएसम्म किन नगर्ने भन्ने लाग्यो। त्यो अनुसार अहिले बढी काम गरिरहेकी छु।
तपाईं हिरोइन भएका यो वर्ष रिलिज फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल रहेनन्। र, पनि तपाईंलाई फिल्ममा अफरको कमी छैन। नेपालमा फिल्म सफल हुनु/नहुनुसँग कलाकारको करिअरको अन्तरसम्बन्ध नहुने रहेछ?
फिल्म हिट नहुनुसँग हामी मात्रै जोडिएका हुँदैनौँ। फिल्म राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रमोसन राम्रो हुँदैन, शो टाइम राम्रो पाइँदैन भने फिल्म कसरी सफल हुन्छ? फिल्म क्षेत्रमा धेरै पोलिटिक्स पनि छ, जसले गर्दा पनि सबै राम्रा फिल्म सफल हुन सकेका छैनन्। फिल्म ‘मौन’ क्यू एफएक्समा चार हप्ता चल्यो तर फ्लप भन्ने हल्ला फैलियो। हेर्नेले नराम्रो पनि भनेका छैनन्। फिल्म ‘मेघा’ हेर्न हाम्रै होस्टेलका बहिनीहरू जाँदा हाउसफुल भनेर टिकट बन्द गरिएको थियो रे। पछि उनीहरू हलमा पस्दा पूरै खाली थियो। हामीले यसलाई कसरी ‘जज’ गर्ने? मैले हिट/फ्लपको जज गर्न छाडिसकेँ, मलाई जबसम्म राम्रो स्त्रि्कप्ट आइरहन्छ, काम गरिरहन्छु।
हलबाहिर नम्रता श्रेष्ठको गजबको चार्म छ भनिन्छ। त्यो महसुस पनि गर्नुभएको होला। तपाईंको फिल्म हेर्न हलभित्र दर्शक कम पुग्छन्। चित्त दुख्दैन?
मलाई त अरूको फिल्म फ्लप हुँदा पनि चित्त दुख्छ। म फिल्ममा काम गर्दा पूरै टिमलाई किन हेर्छु भने यो टिमवर्क हो। तर, मिडियामा आउने हिट/फ्लपको समाचारलाई विश्वास गर्न भने छाडिसकेँ। किनभने, कति फ्लपलाई हिट र हिटलाई फ्लप भनिरहेका हुन्छन्। निर्देशकलाई सोध्छु, उहाँहरूका अनुसार रिजल्ट थाहा पाउँछु। फ्लप भयो भने के पुगेनछ भनेर पनि सोध्छु।
फिल्मको सफलताको लागि प्रचारको कत्तिको भूमिका हुन्छ? आफ्नो फिल्मको प्रचारलाई कत्तिको टाइम दिनुहुन्छ?
पब्लिसिटीको महत्व छ। म क्रिएटिभ पब्लिसिटीका लागि सदा लालायित पनि हुन्छु। फिल्म ‘सानो संसार’का बेला कलेजमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्नेदेखि पोस्टर टाँस्नसम्म आफैँ पुगेका थियौँ। त्यो त्यतिबेलाका लागि नयाँ थियो। निर्मातालाई अहिले पनि म आफैँ भन्छु, ‘पब्लिसिटी प्लान म बनाउँ्क?’ भनेर। दर्शक यति स्मार्ट भइसके, तर हामी चाहिँ अझै फिल्मको नाम लेखिएको टिसर्ट बाँडेर पब्लिसिटी गरिरहेका छौँ। यस्ता धेरै आउटडेटेड आइडिया अझै कायम छन्। हामी इन्टनटेनर हौँ, हाम्रा कुरा रिसिभरसम्म पुग्नका लागि पब्लिसिटी चाहिन्छ। तर, हामीले अझै दर्शककहाँ गएर ‘प्लिज, हाम्रो फिल्म हेरेर दया गरिदिनू’ भन्ने होइन। हाम्रो फिल्म यस्तो छ, यसकारण इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने हो। हावा तालको पब्लिसिटीमा मलाई रुचि छैन।
तपाईंकै अपकमिङ एउटा फिल्मको प्रचार स्टन्ट आजै हेरेको थिएँ। कुनै एकजनासँग तपाईंको अफेयर हुन सक्ने कुरा जोडेर फिल्मको कुरा भइरहेको थियो। यो परम्परागत पब्लिसिटी स्टन्ट तपाईंको सहमतिमा थियो?
प्रचारका नाममा मेरा ५० प्रतिशत इन्टरभ्यू मलाई नसोधी छापिन्छन्। शुभचिन्तकले फोन गरेर ‘नम्रताजी, तपाईंलाई यस्तो मन पर्ने रहेछ नि’ भनेर सोध्दा पो दंग खान्छु। यसैगरी यो पनि आइरहेको होला। मैले हेरेकी थिएँ, कसैसँग मलाई जोडिएको थियो। तर, उहाँसँग मेरो अफेयर रहेको कुरा ठोकुवा गर्न नसकेकाले वास्ता गरिनँ। यसअघि पनि नकिम दाइ बिरामी हुँदा कर्मा र म सँगै भेट्न गएका थियौँ। अफेयरमा रहेको हल्ला चलाइएको थियो।
यस्ता हल्लाले तपाईंलाई कत्ति पनि हल्लाउँदैन?
पहिला–पहिला असर पर्थ्याे। पछि साथीभाइ र आफन्तले 'यस्ता कुरामा अल्भि्कन थाल्यो भने कहीँ पुगिँदैन, बेवास्ता गर्नुपर्छ' भनेर सल्लाह दिए। अहिले पाठक स्मार्ट छन्, उनीहरू पनि फिल्टर गरेर पढ्छन्। सानै ग्रुप होला, जसले मलाई आइडल मान्छ। उनीहरू विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा आएर पनि प्रस्ट हुन्छन्। त्यसैले तनाव हुँदैन। यी कुराहरू भोलि प्रमाणित भएनन् भने अविश्वसनीय हल्ला चलाउनेहरू नै हुन्छन्। आफैँले सही/गलत छुट्याउलान्।
तपाईंको अनुहार सदा चार्मिङ रहनुको रहस्य के हो?
त्यस्तो केही पनि छैन। सुटिङमा पनि मेकअपमा म आफैँले लिएका सामान प्रयोग गर्छु। धेरै पनि गर्दिनँ, किनकि मलाई धेरै मेकअप गर्दा आफू मूर्ति भए जस्तो लाग्छ। चरित्रमा पनि असली अनुहार आओस् भन्ने चाहन्छु।
सुन्दरता मासिएला भन्ने कत्तिको पिर लाग्छ?
सबै हाँस्छन् होला, मलाई कहिल्यै सुन्दरताको चिन्ता लागेन। मेरो सुन्दरताप्रति मेरी दिदी र ममी बरु सचेत हुनुहुन्थ्यो। किनभने, पहिले मलाई अभिनेत्री बन्ने कुनै इच्छा थिएन। म्युजिक भिडियोमा अफर आयो, गरेँ। त्यसपछि फिल्म 'सानो संसार'का लागि आलोक नेम्वाङ दाइले अडिसन दिन बोलाउनुभयो। आउँदिनँ भनेकी थिए, कर गरेपछि अडिसन दिएँ। त्यहाँ छनोट भएँ। त्यसपछि पनि 'फिल्म खेल्ने होला र' भन्ने लागिरहेको थियो। किनभने, त्यसअघि पनि केही फिल्मको अफर आएर पनि मैले अस्वीकार गरिसकेकी थिएँ। म नेपाली फिल्मको दर्शक थिइनँ, त्यसैले नेपाली फिल्म खेल्दिनँ भन्ने थियो। अहिले यही क्षेत्रमा छु। कुनै पछुतो छैन।
हिरोइन हुनका लागि सुन्दरताले कति प्रतिशत सहयोग गर्ने रहेछ?
मलाई राम्री भएर मात्रै हिरोइन भइन्छ जस्तो लाग्दैन। हिरोइन क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टरमा फिट हुने सबै राम्रा हिरोइन हन्। म जुन दिन यो क्षेत्रमा आएँ, त्यो दिनदेखि अभिनय सिक्नमै केन्द्रित छु। म प्रशिक्षित कलाकार होइन। त्यसैले सहकर्मी कलाकारसँग केही सिक्न पाइन्छ भन्ने लोभले नजिकिन्छु। पहिलो फिल्ममा कर्मासँग सिकेँ। त्यसैगरी सौगात (मल्ल) दाइ जस्ता अभिनेतासँग सदा छलफल गरिरहेकी हुन्छु।
आफूलाई आफू कत्तिको राम्रो लाग्छ?
पहिला खास लाग्नैथ्यो। एउटा कार्यक्रमका लागि विदेशी कलाकारहरूसँग तीन दिन रहँदा भने मलाई राम्री पनि रहिछु भन्ने अनुभव भएको थियो। किनभने, त्यहाँ विभिन्न देशका महिला कलाकार थिए, तर त्यहाँ बाहिर रहेका अडियन्सले मसँग तस्बिर खिचाउन चाहे।
तपाईंलाई हिरोइन बन्न मन थिएन। के बन्न चाहिँ मन थियो?
मलाई बच्चा खूब मन पर्छन्। आफू सानो हुँदा पनि म बच्चा लिएर हिँडिरहेकी हुन्थेँ। त्यसैले चाइल्ड साइकोलोजिस्ट बन्ने ठूलो रहर थियो। त्यता सोच्नै नपाई यता करिअर सुरु भइसकेछ। तर, पछुतो भने छैन।
विश्वकपको ज्वरोले कत्तिको ग्रस्त बनाएको छ?
हेर्न पाएसम्म हेर्छु। ज्वरो आउनै नपाई सेलायो। किनभने, सुरुका खेल हुँदा म सुटिङका लागि बाहिर थिएँ। म काठमाडौँ आउँदा मन परेको टिम स्पेन बाहिरिसकेको थियो।
स्पेनको जर्सी खेर गएछ?
मसँग जर्सी मात्रै कहाँ हो र? क्याप, टिसर्ट, झन्डा पनि थिए। प्रयोग गर्नै नपाई टोली बाहिरियो।
मन पर्ने फुटबल खेलाडी?
टेबलटेनिस खेल्थेँ। राष्ट्रियस्तरको खेलका लागि छनोट पनि भएकी थिएँ। जाँच नजिकिएकाले स्कुलले छुट्टी दिएन। त्यसपछि छाडिदिएँ।
Tags: मनोरन्जन (शुक्रबारबाट)
Post by: raati on April 27, 2020, 08:42:52 AM
She bounce back. She isastrong women.
Post by: sayen on May 12, 2020, 08:43:25 AM
Post by: coolboy on September 13, 2020, 10:17:25 AM